မိဘနှစ်ပါးဆီက နေချင်စဖွယ်အိမ်လေးတစ်လုံး မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်း – အောငျနိုငျသူ
Aung Naing Thu | November 8, 2020 | Cele News | No Comments
နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ကတော့ ချစ်သူဘဝမှာတင် မမျှော်လင့်ပဲနဲ့ ရင်သွေးလေးကို ရရှိခဲ့တာမို့ နှစ်ဖက်မိဘတွေ သဘောတူကြည်ဖြူစွာနဲ့ဘဲ ရွှေလက်တွဲ လက်ထပ်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့မှာတော့ မင်္ဂလာလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး တော့ အခုဆိုရင် တစ်အိုးတစ်အိမ်တည်ထောင်ကာ နှစ်ကိုယ်တူဘဝလေးကို စတင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်တွေကလည်း
နေနဲ့လ ရွှေနဲ့မြလို လိုက်ဖက်လွန်းတဲ့ စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းအတွက် ကောင်းချီးပေး ဂုဏ်ပြုနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီကနေ့မှာတော့ စည်ဖြိုးက အဆင့်မြင့်အိမ်ယာထဲရှိ
နေအိမ်လေးတစ်လုံးရရှိခဲ့ကြောင်းကို အပူပင်ကင်းပြီး သာယာငြိမ်းအေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခု.. ဖေကြီးနဲ့မေကြီး မေတ္တာလမ်းခင်းလို့ လက်ဖွဲ့ခဲ့တယ်။ အတိုင်းမသိပါ။ ရင်ထဲ ကလေးလေးဆော့နေမှာ မြင်ယောင်မိတယ် . ဆိုပြီး ပြောလာတာပါ။
ခင်လွှမ်းကလည်း ယောက္ခမတွေရဲ့ မေတ္တာလက်ဆောင်ကို မေတ္တာအပြည့်နဲ့ပေးတဲ့ မေတ္တာ အရိပ်မြုံလေး 🥰 သားသမီးဝတ္တရား အသက်ထက်ဆုံး ကျေပွန်သွားပါ့မယ်ရှင် ဆိုပြီးတော့ ကျေးဇူးတင် ဝမ်းသာစကား ပြောထားတာပါ။
စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ကတော့ မိဘတွေပေးတဲ့ အသိုက်အမြုံလေးမှာ သားသမီးတွေနဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝလေးကို တည်ဆောက်သွားကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ကိုကြည့်ပြီး အားကျကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။credit
Unicode…မိဘနှဈပါးဆီက နခေငျြစဖှယျအိမျလေးတဈလုံး မင်ျဂလာလကျဖှဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျး
နိုငျငံကြျော အနုပညာရှငျနှဈယောကျဖွဈတဲ့ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးတို့ကတော့ ခဈြသူဘဝမှာတငျ မမြှျောလငျ့ပဲနဲ့ ရငျသှေးလေးကို ရရှိခဲ့တာမို့ နှဈဖကျမိဘတှေ သဘောတူကွညျဖွူစှာနဲ့ဘဲ ရှလေကျတှဲ လကျထပျခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျနျော။
စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နိုဝငျဘာလ (၅) ရကျနမှေ့ာတော့ မင်ျဂလာလကျမှတျထိုးခဲ့ပွီဖွဈပွီး တော့ အခုဆိုရငျ တဈအိုးတဈအိမျတညျထောငျကာ နှဈကိုယျတူဘဝလေးကို စတငျနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျနျော။ ပရိသတျတှကေလညျး
နနေဲ့လ ရှနေဲ့မွလို လိုကျဖကျလှနျးတဲ့ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးအတှကျ ကောငျးခြီးပေး ဂုဏျပွုနတောပဲ ဖွဈပါတယျနျော။ဒီကနမှေ့ာတော့ စညျဖွိုးက အဆငျ့မွငျ့အိမျယာထဲရှိ
နအေိမျလေးတဈလုံးရရှိခဲ့ကွောငျးကို အပူပငျကငျးပွီး သာယာငွိမျးအေးတဲ့ ပတျဝနျးကငျြလေးတဈခု.. ဖကွေီးနဲ့မကွေီး မတ်ေတာလမျးခငျးလို့ လကျဖှဲ့ခဲ့တယျ။ အတိုငျးမသိပါ။ ရငျထဲ ကလေးလေးဆော့နမှော မွငျယောငျမိတယျ . ဆိုပွီး ပွောလာတာပါ။
ခငျလှမျးကလညျး ယောက်ခမတှရေဲ့ မတ်ေတာလကျဆောငျကို မတ်ေတာအပွညျ့နဲ့ပေးတဲ့ မတ်ေတာ အရိပျမွုံလေး 🥰 သားသမီးဝတ်တရား အသကျထကျဆုံး ကပြှေနျသှားပါ့မယျရှငျ ဆိုပွီးတော့ ကြေးဇူးတငျ ဝမျးသာစကား ပွောထားတာပါ။
စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးတို့ကတော့ မိဘတှပေေးတဲ့ အသိုကျအမွုံလေးမှာ သားသမီးတှနေဲ့ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ ဘဝလေးကို တညျဆောကျသှားကွမှာပဲ ဖွဈပါတယျနျော။ ခဈြပရိသတျကွီးလညျး စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးတို့ကိုကွညျ့ပွီး အားကကြွမယျ ထငျပါတယျနျော။credit
ကိုဗစ်ကာလမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဝမ်းနည်းစွာ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဦးတိမ်ညွန့်
ဟန်နီချိုကို အားရပါးရမုန်းလို့ရပေမယ့် ဇာတ်လမ်းလို့ပဲမြင်ပေးပြီး အပြင်ကလူကို ပါဆွဲမထည့်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလာတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်
နောက်တစ်ပတ် သောကြာနေ့မှာ ကြည့်ရှူရတော့မယ့် အောင်လနဲ့ စိန်ခေါ်သူ ဒီရစ်ဒါ တို့ရဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်း
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ချစ်စရာအကောင်းဆုံးသူနာပြုလို့ လူသိများပြီး Tiktok ကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ချစ်စရာဆင်ငယ်လေး